आत्महत्या Archives - Lokpati.com
Tag - आत्महत्या
नाबालिका छोरीसहित रामबहादुरले गरे आत्महत्या
कैलाली, ६ असोज । कैलालीमा एक पुरुषले तीन वर्षीय छोरीसँगै आत्महत्या गरेका छन्। गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ५ का रामबहादुर कलेलले सल्पास नामक विषादी सेवन गरेर आत्महत्या गरेका हुन्।
उनले तीन वर्षीया छोरी अनुष्कालाई पनि सल्पास...
इलाम, ६ असाेज। इलाममा आइतबार एक व्यक्तिले दाजुलाई खुकुरी प्रहार गरेर आत्महत्या गरेका छन् । इलाम सन्दकपुर गाउँपालिका–१ झ्याउपोखरी बस्ने ४२ वर्षीय बुद्धवीर राईले आफ्नै ६४ वर्षीय दाइ विष्णु राईलाई खुकुरी प्रहार गरेर आफूले...
किन नेपाल आएर आत्महत्या गरे भारतीय नागरिकले ?
बनियानी, २० भदौ। झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा एक भारतीय नागरिकले आफ्नो शरीरमा आगो लगाएर आत्महत्या गरेका छन्।
अर्जुनधारा–६ महानन्द चोकमा रहेको प्रदीप गिरीको फर्निचरमा काम गर्ने भारतीय नागरिक २३ वर्षीय विश्वनाथ बरमनले...
सिरहा, ११ भदौ। आर्थिक वर्ष २०७५\_०७६ मा सिरहामा ८८ जनाले आत्महत्या गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७५\_०७६ मा सिरहामा ८८ जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रवक्ता एवं डिएसपी अपिल बोहरनले...
पुडासैनी आत्महत्या प्रकरण : आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा पेस
चितवन, ८ भदौ । नुवाकोटका पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्याको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलमा आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा पेस गरेको छ।
चितवन आएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान टोलीका प्रहरी उपरिक्षक दिपक...
रवि लामिछानेका फ्यानहरुलाई खुल्ला–पत्र
रवि लामिछाने विद्रोही नेता होइनन्। राज्यकै प्रचलित कानून मान्छु भनेर सञ्चार माध्यम चलाएका व्यक्ति हुन्। उनी पत्रकार हुन् कि होइनन्, त्यो पनि बहसकै विषय छ। तर, राज्यको एक नागरिकले राज्यलाई नै चुनौति दिन मिल्छ ? कि उनी यो सबै...
पत्रकार पुडासैनीकाे भिडियाे बाहिरियाे, आत्महत्या प्रकरण थप रहस्यमय !
काठमाडाैं । पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुअघि खिचेको भिडियो सार्वजनिक भएसँगै उनको मृत्युको विषय थप रहस्यमय र गम्भिर मोडमा पुगेको छ ।
पत्रकार पुडासैनी स्वयंले आत्महत्या गर्नुअघि खिचिएको भिडियो उनकै परिवारले...
काठमाडाैं । चितवनमा आत्महत्या गरेका नुवाकोटका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुअघि बोलेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
नेपाल आजको युट्युवमा सार्वजनिक भिडियोमा उनले आफ्नो मृत्युको कारण चर्चित सञ्चारकर्मी रवी...
अमेरिकी अर्बपति एप्स्टाइनले गरे जेलभित्रै आत्महत्या
न्यूयोर्क । बालयौन दुराचारको आरोपमा जेलमा परेका अमेरिकी अर्बपति व्यापारी जेफ्री एप्स्टाइनले शनिबार न्यूयोर्कको जेलभित्रै आत्महत्या गरेका छन् । अमेरिकी सङ्घीय जाँच ब्युरो (एफबीआई) र न्याय विभागले भने एप्स्टाइनले...
काठमाडौं । पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको मृत्यु आत्महत्या दुरुत्साहनबाट भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । मृत्युअघि उनले रेकर्ड गरेको भिडियोमा केही मानिसका कारण आफू आत्महत्या गर्न लागेको उल्लेख भएको जनाइएको...